Xoolo-dhaqatada Galmudug oo ka cabanaya biyo-yari iyo daaq-la'aan ka jirta deegaannada gobolka - Radio Ergo
Xoolo-dhaqatada Galmudug oo ka cabanaya biyo-yari iyo daaq-la’aan ka jirta deegaannada gobolka
(ERGO) – Daahir Axmed Kaahiye oo ah xoolo-dhaqato ku nool deegaanka Dhabarduleel ee duleedka Ceelguula, gobolka Galmudug waxaa bilihii August iyo September ka dhintay 80 neef oo ari ah. Boqol iyo soddon neef kale oo u soo haray ayaa caano iyo cad toona laheyn. Wuxuu ka walwalsan yahay in tirade ariga u soo haray ay sidoo kale ka le’daan.
Tan iyo markii uu ceelka Ceelguula oo ay xoolaha biyo ka cabi jireen ay cillad farsamo ku timid bishii August ee sanadkaan, ariga Daahir ayaa sii dhamaanaya maalinba maalinta ka dambeysa. Deegaanka oo 110 km koonfur ka xiga Gaalkacyo ayaa saddexdii xilli roobaad ee la soo dhaafey roob la’aan ahaa.
“Bishii siddeed waa toddobaadeen jireen, toddobaad markii la joogaba hormaa bixi jirtay hormaa iska hari jirtay, hadda habeennadaan dambe waxay keeneen habeen uusan baryin ama maalintii markii geedaha la soo hariyo in uu ku baqtiyo,” ayuu yiri.
Wuxuu sheegay in xoolihiisa uu u waayay beec weydnimada ka dhalatay nacfi-la’aantooda darteed. Wuxuu joojiyay raashin uu siin jiray shan bil ka hor kaddib markii cudud dhaqaale u waayay.
“Badarkii wuxuu tagay adigu ilaa $40 ayuu kiishkii marayaa galleyda, waaba la gadi waayay. Hadda waa la iska daayay xoolaha dhulkaa la iska dhigay, biyihii iyo badarkii labadiiba waa la gadi wayay,” ayuu yiri.
Daahir oo ah aabaha 12 carruur ah, waxaa lagu leeyahay deyn $2,000 ah oo uu ku soo qaatey raashinkii uu siinayay xoolihiisa. Wuxuu xusay in lacagtaas ay ka hor istaagtay sii socoshada raashinkii uu siin lahaa xoolaha u haray maaddaama ganacsatadu ay ka biyo diideen dayn kale. Wuxuu sheegay in biyaha ay isticmaalaan qoyskiisa uu uga soo baryo dadka deriska la ah ee biyaha ka iibsada booyado ka soo dhaamiya deegaanka Toore oo 45 km u jira.
“Qaraabada waxaan ka soo helo ayaan ku noolnahay. Qof waxaan ka soo helaa haaf sonkor ah, qof kale haaf bariis ah, qof caag saliid ah, sidaas ayaan isaga noolnahay. Qof bini’aadan ah oo kale oo wax ii soo dira iyo hay’ad noo timid midna ma jirto,” ayuu yiri Daahir oo aan haysan il-dhaqaale kale oo aan xoolaha ahayn.
Daahir wuxuu sheegay in ay jiraan qoysas la deggen deegaanka Dhabarduleel oo halis ugu jira in xoolo la’aan ay ku dhacdo maaddaama abaarihii hore ay badeen xoolo-yari.
Xaaladda biyo-yarida iyo baad la’aanta ayaa sidoo kale ka jira tuulooyinka kale ee deegaanka Ceelguula oo ay ka mid yihiin Ballicad, Dhoobacadde iyo Miirsaare.
Muxyadiin Maxamed Xasan oo 150 neef oo ari ah iyo 10 geel ah ku dhaqda miyiga tuulada Dhoobacadde ee gobolka Mudug wuxuu ku fikiray in uu ula hayaamo xoolihiisa dhulka ku teedsan xeebta Hobyo, halkaasi oo loogu sheegay caws. Balse wuxuu waayay lacag ka badan $1,000 oo uu ku dalbado gaadiid xoolaha u qaada.
Muxyadiin wuxuu ka doorbiday guuritaanka in uu xoolihiisa uga soo deynto raashin bakhaaradda deegaanka.
“Asbuucii la soo dhaafey 13 neef baan anigu xeradayda ka tiriyay. Ninkii hadda nin uu garanayo ama se wax dayminaya helayaana xoolihiisa raashin buu u daba-taxay,” ayuu yiri.
Qoyskiisa oo siddeed qof ah ayuu sidoo kale raashinka u deynsadaa isagoo ku muddeeyay ganacsatada bakhaarada in daynta uu siin doono marka xoolihiisu ay abaarta ka baxaan. Wuxuu sheegay in lagu leeyahay $900.
Muxyadiin ayaa ku tusaaleeyay saan-saanta biyo-yarida iyo daaq-la’aanta xoolaha ka dilaysa abaartii sanadihii 2016-2017 xoolo-dhaqato badan cayraysay.
Guddoomiyaha deegaanka Ceelguula Cali Baashi Macalin ayaa Raadiyow Ergo u sheegay in 100 qof oo xooluhu dhaafeen ay soo galeen Ceelguula.
“Dadkaan xoolahay ku tiirsanaayeen, xoolihiina aad bay u sii dabar go’ayaan, kuwaa ku aruuray magaalada kaddib markii ay xoolaha ka le’deen, iyagoo wax uga horreeya hoy iyo meel ay ku hirtaan aan lahayn oo dulsaar dadka ku ah. Waxay u baahan yihiin gargaar deg deg ah,” ayuu yiri.
Xoolo-dhaqato uu ku qiyaasay guddoomiyuhu 2,500 oo qoys ayuu xusay in ay ku nool yihiin deegaannada hoostaga Ceelguula, kuwaas oo daaq-la’aan iyo biyo-yari ay iskugu darsantay.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in maamulka Galmdug iyo hay’adaha samafalka uu kala hadlayo hagaajinta ceelka iyo u gurmashada qoysaska ay xooluhu dhaafeen iyo kuwa weli la halgamaya samata-bixinta xoolahooda.
Muqdisho: Qoysas khasab looga raray xeryo barakac oo ku sugan xaalad adag
Carruur iyo waalidkood oo ku kala lumay barakicinta Laascaanood